Waa Aroos Aan Aqal Gal Lahayn? |
Dumar ay tiradoodu gaareyso 4,000 oo ku kala nool dalal kala duwan ayaa go’aan ku gaaray iney waligood ilaashadaan gabarnimadooda ama bikranimadooda, guurka bani’aadamkana ay ka caagganaadaan, iyagoo arrintaasna ku saleeyay waxyaabo ay diin ahaan u aaminsanyihiin.
Jessica Hayes, waxay kamid tahay dumarka noloshooda gabarnimo u hibeeyay ee guurka ka caaggan. Waxay isku soo diyaarisay una soo labisatay qaabkii aroosadda, laakiin markii ay soo hor istaagtay wadaad diimeedkii guurkeeda go’aamin lahaa ee xafladda ka soo qeyb galay, ma jirin nin garabkeeda taagnaa oo loo guurin karay.
Waxay aaminsaneyd inay guursaneyso Jesus (oo Muslimiinta u yaqaanaan Nabi Ciise), waxaana loo tix galiyay codsigeeda ahaa in xafladda arooska la dhigo. Intii ay xafladda aroosku socotay ayey wacad ku martay ineysan waligeed nin gogol la wadaagi doonin, gabarnimadeedana ay heysan doonto ilaa inta ay ka dhimaneyso.
“Badanaa waxaa la i weydiiyaa su’aasha ah: ‘ma lagu qabaa?’, anigana waxaan mar walba ku jawaabaa sharraxaad yar oo ku saabsan inaan ahay sida dumarka walaalaha masiixiyiinta la yiraahdo ee guurka ka caaggan” ayey tiri Ms Hayes.
“Waxaan macallimad ahaa muddo 18 sano ah, waxaan ardayda wax ku bari jiray dugsi sare oo ah kii aan aniga markii hore dhigtay” ayey tiri haweeneydan oo ku nool gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
‘Dhaqan diimeed waligiis soo jiray’
Tags: Waa Aroos Aan Aqal Gal Lahayn?
Next post Wiil Soomaali ah oo Allifay Koronta Xarig La'aan Ku Shaqeyneysa! - Mansh'Allah
Previous post Taariikh Nololeedkii Abwaan Qiiq oo Kooban 1973-2018